Marc Ravalomanana “Zava-dehibe ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana ny Fiangonana”
Nanatrika ny fivoriambe faha-22 ho an'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana teny amin’ny fiangonana FJKM Ambohibe Ilafy Fitahiana i Marc Ravalomanana omaly maraina amin’ny maha filohan’ny jobily faha-50 taonan’ny FJKM azy.
teo amin’ny faha-85 taonany. Arsevekan’Antananarivo teo anelanelan’ny taona 1994 sy 2005 i Mgr Razafindratandra Armand Gaetan. Tetsy an-kilany, mba nitondra tsirim-panantenana ho an’ny mpino katolika ny fitsidihan’ny sekreteram-panjakan’i Vatikana, Kardinaly Pietro Parolin teto tamin’ny volana janoary 2017, nanamarika ny faha-50 taonan’ny fifandraisana diplomatika eo amin’i Vatikana sy Madagasikara, fa hotendrena tsy ho ela ny kardinaly eto Madagasikara. Tsy izay no nitranga, fa toa loza samihafa aza no nosedrain’ny fiangonana katolika tamin’ity 2017 madiva hivalona ity, noho ny sotasota sy herisetra tamin’ny endriny samihafa. Lasibatry ny halatra lakolosy ny fiangonana ary saika manerana ny Nosy no nahenoana tranga toy izany. Namoy ny ainy niharan’ny habibian’ny jiolahy ny pretra iray Jiva Lucien, 46 taona, tao amin’ny tobin-drelijiozy « Noviciat des Frères Mineurs Capucins » ao Ambendrana Antsohihy, tamin’ny volana aprily 2017. Nisy koa frera iray naratra mafy ary voatery nalefa taty Antananarivo notsaboina. Teo ny vaky trano niaro fanolanana masera Notre Dame de la Salette ao Antsahatanteraka Antsirabe faharoa, ny 1 aprily 2017, izay nahaverezana vola sy fitaovana.